Nisy ny hosoka nodiana tsy hita, mitohy ny tantara na izany aza - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ravo. Izay no azo hilazana ireo vahoaka maro mijery baolina eny anivon’ny fokontany. Feno hafaliana tokoa izy ireo.Matetika dia zanaky ny eny amin’ny fokontany no milalao dia mahalala ny ankamaroan’ireo mpilalao ny mpijery. Indraindray anefa dia rava ilay haravoana. Fihetsika kely tsy voahevitra teny ambony kianja no pitik’afo nandrehitra ny hatezerana ka mandrava ny lalao. Tsisy ny rafitra to teny mitsara ny ady. Fifampiresahana no handravonana ny disadisa. Vita izany satria ekipa mifanena sy mifandona mandavan-taona eny ireo mpifanandrina. Samy zanaky ny ao antanàna.
Raha miakatra sokajy isika ka mitazana ireny lalao karakarain’ny federasiona ireny dia mahita fa sendra misy ny olana eny ankianja dia misy ny rafitra mitsara izany aorian’ny lalao. Maro karazana io olana io. Tsy voatery mandritra ny lalao no misy ny olana. Ohatra iray tokoa dia samy nandre ny fangalaran-taona nisy teo amin’ireo tanora nofantenana handrafitra ny ekipam-pirenena U-20 isika. Naka fanapahan-kevitra hentitra ny federasiona. Tsy nandray anjara tamin’ny fifaninanana ny ekipam-pirenena. Henjana izany sazy izany. Azo inoana fa tsy tao anatin’ny lisitra ny fahotana hiseho izany halatra taona izany kanefa dia nahitana sazy mifanaraka aminy.
Tsy eto Madagasikara ihany no ahitana olana eo amin’ny resaka baolina kitra. Lalao iombonan’ny vahoaka maro tokoa raha ity baolina kitra ity. Izy no be mpijery indrindra
raha ny coupe du monde no itarafana azy.
Main de Dieu, main de Vata…
Nalaza ny “Main de Dieu” an’i Maradona tamin’ny 1986, fiadiana ny amboara erantany amin’ny baolina kitra natao tany Arzantina. Lalao ampahefa-dalana a nahatafita ny ekipam-pirenena arzantina hatrany amin’ny famaranana ary nahazoany ny amboara eran-tany. Isan’ny olana hita tany ivelany koa ilay antsoina hoe “Main de Vata”. Lalao manasa-dalana nifanatrehan’I Marseille sy Benfica. Tamin’ny tanany tokoa no nampidiran’i Maradona ny baolina ka nahafahan’ny ekipam-pirenena arzantina nandray anjara tamin’ny lalao famaranana ary nahatonga azy ireo ho tompondaka eran-tany. Ireo tsara maso nahita nivantana. Ny maro kosa aty aoriana vao nahita izany. Saingy… Mipetraka ho tantara izany fa tsy nisy ny sazy noraisina.
Ny ekipan’i Marseille koa dia isan’ny ekipa nandrenesana olana maromaro. Marseille-Valenciennes. Ireo mpanaraka tantaran’ny baolina kitra dia mahalala izany trangana izany. Niafara teny amin’ny fitsarana ivelan’ny fitsaran’ny baolina kitra ny raharaha. Nisy ny anaram-boninahitra noesorina vokatr’izany fitsarana izany.
Ny ao Italia ao dia matetika andrenesana olana satria be ny mpiloka (totonero) ao ka manimba ny lalao baolina izany (match truqué). Efa maro izay raharaha niakatra fitsarana izay raha ny ao Italia manokana fa tsy manakana ny hosoka sy halatra sy fisolokiana izany.
Hosoka avo lenta
Maro ny tranga misy nahitana hosoka sy fisolokiana raha ny eo amin’ny lalao baolina kitra fotsiny no raisina. Fa raha hitarina amin’ny taranja hafa izany dia samy mahita ohatra ho tanisaina isika tsirairay avy. Ny malaza indrindra dia ilay mpihazakazaka ambisikileta Greg Lemond. Voatery nesorina tamin’ny ireo anaram-boninahitra marobe efa azony teny ankianja. Teo koa i Ben Johnson teo amin’ny atletisma. Noesorina taminy ihany koa ny anaram-boninahitra hazony teny ankianja.
Araka ny ohatra hitantsika ireo dia misy hatrany ny finiavan’ny olona hanao hosoka. Misy ireo lalàna efa nomanina hanasazy ny tranga. Misy kosa anefa tranga izay tsy voavinavina mialoha ny fisehoany fa nandraisan’ny mpiandraikitra fanapahan-kevitra sahaza. Misy ireo tranga (main de Vata nitranga tamin’ny 1989-1990, coupe de des clubs Champions) izay nahitana fa nojerem-potsiny ka nahatonga an’i Bernard Tapie nilaza fa hainy manomboka izao ny fomba sy paika eo amin’ny tontolon’ny baolina kitra. Izany ve no nahatonga ny raharaha Marseille-Valenciennes (nitranga tamin’ny 1993) taty aoriana? Asa. Tonga an-tsaina izany manoloana ny olana nisy tamin’ny fifidianana filoham-pirenena teo. Maro no nitaraina. Toa tsy nisy ny sazy noraisina manoloana ireny fitarainana heverina fa marim-pototra ireny. Misy tombontsoa narovana tao ary nanalavitana ny korontana. Izay tokoa angamba no masaka tao an-tsain’ireo mpitsara tao anivon’ny CES. Moa va tsy efa nisy niteny fa aoka hitsara araka ny tombontsoam-pirenena (izany hoe tsy araka ny lalàna velona) ? Diniho sy saino.